कहाँनीरको कोठीले धनी गरिबको संकेत गर्छ ? जान्नुहोस् – hamrosandesh.com
कहाँनीरको कोठीले धनी गरिबको संकेत गर्छ ? जान्नुहोस्
समुद्रशास्त्रमा शरीरमा कोठीको महत्वको बारेमा बताइएको छ । शास्त्रका अनुसार कोठीले हाम्रो जीवनमा समेत प्रभाव पार्ने गर्छ । कुनै पनि ब्यक्तिको शरीरको कोठीको स्थानलाई हेरेर उसको स्वभाव र भविष्यको बारेमा कैयौँ जानकारीहरु प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
समुन्दशास्त्रका अनुसार यी पाँच स्थानमा कोठी हुनेहरुहरुलाई कसैले पनि हराउन सक्दैन ।ज्योतिष शास्त्रका अनुसार शरीरको बिभिन्न अङ्गहरुमा भएको कोठीले भबिष्यको बिश्लेषण गर्छ । शरीरको कुनैपनि अङ्गमा कोठी हुनुले केहि न केही कुराको संकेत गर्छ ।
जसको निधारको बिचमा कोठी हुन्छ त्यस्ता मानिसहरुको मन एकदमै सफा हुन्छ । यस्ता मानिसहरु मायाप्रेमको मामलामा एकदमै बफादार हुन्छन् । निधारको दाहिनेतर्फ भएको कोठीले अन्र्तनिहीत प्रतिभाको संकेत गर्छ । यस्ता मानिसहरुले आफुमा भएको प्रतिभालाई चिनेको खण्डकमा जीवनमा ठुलो सफलता हात पार्छन् ।
पुरुष मित्रसँग ईष्र्या गर्ने पुरुष:
यदि कुनै पुरुषले आफ्नो प्रेमिकालाई उसको पुरुष मित्रसँग बोल्न दिदैन् र ईष्र्या गर्ने गर्दछन् भने त्यस्ता पुरुषको नजिक पनि हुन् चाहदैन् महिलाहरू।